Madagasikara –Torkia : hampitomboana ny fifanarahana ara-barotra | NewsMada
Madagasikara –Torkia : hampitomboana ny fifanarahana ara-barotra
Tsy nampiozin’ny maro ny fitsidihana nataon’ny filoha tiorka, Recep Erdogan, tonga ny alin’ny 25 janoary. Anton-diany mazava ny hametraka fiaraha-miasa ara-toekarena eo amin’ny firenena roa tonta, indrindra amin’ny lafiny varotra, ny hanangana fiaraha-miasa amina sehatra maro, hisian’ny fampandrosoana haingana. Manana ny tanjany ny firenena tiorka, ary tsy miankina velively amin’ny firenena tandrefana.
Nitondra mpandraharaha mpampiasa vola maro ny filoha tiorka, nifampidinika tamin’ny mpandraharaha malagasy. Izany fotoana izany nentina nanangonan-kevitra amin’izay mety hitondran’ireo mpampiasa vola tiorka ireo hampiasa vola eto Madagasikara. Mino ny filoha Erdogna fa ho resy lahatra hampiasa vola eto amintsika ireo mpandraharaha avy any aminy. Sehatra maro voakasika amin’izany: fitaterana, angovo, fizahantany, harena an-kibon’ny tany, fampianarana. Marihina fa efa manao asa fitaterana ana habakabaka aty amintsika ry zareo Tiorka. Eo amin’ny lafiny fampianarana, manome vatsim-pianarana ho an’ny tanora malagasy ny fanjakana tiorka. Noho izany, araka ny fifanarahana vita sonia omaly, hamafisina sy hampitomboana ny fifanarahana ara-barotra eo amin’ny roa tonta.
Fiaraha-midinika teo amin’ny mpandraharaha roa tonta
Nandritra izao fandalovan’ny filoha tiorka izao koa ny nanaovana fivoriana niantsoana ireo mpandraharaha malagasy hitrandraka ny tsena any Torkia. Nifampidinihana tao amin’ny CCI Ivato ny lalam-barotra any Torkia mety ho zakan’ny Malagasy. Nilaza ny mpitarika fa azo hamoraina ho an’ny Malagasy ny fitrandrahana tsena any amin’io firenena io. Eo amin’ny lamina ara-bola, manana ny tanjany i Torkia, koa miankina amin’ny fahaizana mifampiraharaha ny fomba hahitana famatsiam-bola. Lalam-pihariana hafa sy vaovao ho an’ny mpandraharaha malagasy ny mitady sy mifanaraka amin’ny mpiara-miombon’antoka torka.
Nampitandrina ny filoha Rajaonarimampianina, ny filoha Erdogan, ny amin’ny mety hisian’ny fanonganam-panjakana sy ny tambajotra ao ambadik’izany. Manao izay tsy hahatanteraka ny politika fampandrosoana nofaritina eto amin’ny firenena izany tambajotra izany, tanjona ny hampilentika ao anatin’ny fahantrana hatrany ny vahoaka malagasy, araka ny fanazavan’ny filoha Erdogan.